Sarudza vakaisvonaka zvitoro zviri nepachinko yokumusoro zviitiko
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Sarudza vakaisvonaka zvitoro zviri nepachinko yokumusoro zviitiko
Imhandoi nepachinko chitoro kana kutokurudzira kuita chiitiko, tichakurukura kuti Katore apo zvikaonekwa.
■ mwedzi mumwe chiratidzo chiitiko
Chokutanga, ari nepachinko yokumusoro, iyo akabata chiratidzo chiitiko kamwe pamwedzi. In nepachinko yokumusoro nokupinda kwenyu, edza kuti asimbise kana muri wakabata chiratidzo chiitiko.
nokuti zuva rakanga kuzoitwa chiratidzo chiitiko, Dattari Open Date nokuda zvitoro, nokuti zuva kazhinji anokosha, ari kuisa chinhu chikonzero, inogona kuedza Kushumira payout pamusoro pane.
Dzimwe nguva, musi kuguma iwoyo, asi pane nepachinko yokumusoro anoti billboard zviitiko zvose, nepachinko chitoro kwakadaro, bhora kunze, nokuti nyore uye vakapararira ne zuva, kumwe ari kuzoita zuva iri pane mukana anopiwa.
Zvisinei, kana mwedzi uye chikuru, nokuti Shumirai pfungwa, ndechokuti nokurohwa bhora kubva pane nepachinko yokumusoro, akadai rikaisa kare guru.
Zvisinei, achiri kunzi chiratidzo chiitiko, nokuti nepachinko hombe yokumusoro unomhanya kuti kuzoita Purofiti, uchiri kuda nechokwadi rwose payout kunzwa nameso angu. Kana, imi chokwadi muchida kushandisa mabasa akadai date Robo nzvimbo Seven.
■ nguva musiyano pakati rakavhurika chiitiko
Kazhinji, asi zvauri kutiza mangwanani, kuitira kuti 15 o'clock akazarurwa uye 19 o'clock akazaruka, pane zviitiko zviri kuderedza oparesheni nguva. Kana kumhanya nguva ipfupi pamusoro, zvingaita sokuti hapana munhu kupora, chaizvoizvo uri vakutarisire. Muna nepachinko yokumusoro, asi dzimwe nguva zvakare mabasa yakakurumbira yokutevedzera, nechigadziko inotakura zvakanaka chiitiko chakadaro mienzaniso uchida kuwedzera oparesheni. It anoda kuwedzera
kumhanya, zvichava kuva chokwadi kuti kuda kusiya vakanaka. Uyewo shop yakakurumbira yokutevedzera, chiitiko ichi kunowanzoitwa mu mienzaniso yakadaro muchida kushandisa refu.
Kazhinji, kunyange zvakakomba mhando muenzaniso uye chipikiri kugadziridzwa asingaiti kuti zvikuru yakatarwa, apo nguva musiyano pakati pakachena zviitiko, isu kazhinji tiri nani pane dzose. Nokuda kwechikonzero ichocho, nepachinko chitoro rinova kuitwa kakawanda mwedzi nguva musiyano pakati chiitiko rakavhurika, zvichava raireva varumbidze.
Zvisinei, kana iri pachena kana yaisafarirwa yokutevedzera, saka iwe unopa panewo kuti "Imi kana akapora zvishoma pamberi kubviswa ...", kuti muno, Ya shopu basa gwara kubva senguva vachatitaka panodikanwa kuti kuongorora nekuti rakavimbika.
■ ari chiitiko
achachinja, akadai kukabatanidzwa grounder, nezvechiitiko akadai kuti mutambo grounder muenzaniso zita uye musi, edza kuona kuti dzakanga dziri ndingangokuvara Gase zviitiko zvinokwezva vatengi chinangwa.
izvi chete kuitika nyaya, haushandi kune zvose. Sezvo chitoro kusarudza zvichachinja zvikuru nepachinko yokukunda kana kukundwa, tinofanira kuongorora unhu uye dzinoitwa hangout ane nepachinko yaiitirwa kubva dzose uyewo unotambudza. Zvisinei, kana iwe akaisa netepimezha mhando iyi musoro, ndiko nyaya ..., Kuti sokuti zvinhu zvakanga zvisina kuonekwa kusvikira ikozvino. Events akadai avo, edza kuona kuti dzakanga dziri ndingangokuvara Gase zviitiko zvinokwezva vatengi chinangwa.
izvi chete kuitika nyaya, haushandi kune zvose. Sezvo chitoro kusarudza zvichachinja zvikuru nepachinko yokukunda kana kukundwa, tinofanira kuongorora unhu uye dzinoitwa hangout ane nepachinko yaiitirwa kubva dzose uyewo unotambudza. Zvisinei, kana iwe akaisa netepimezha mhando iyi musoro, ndiko nyaya ..., Kuti sokuti zvinhu zvakanga zvisina kuonekwa kusvikira ikozvino.